स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप नचल्ने ! – गोर्खा संसार
सन्दिप न्यौपाने र सरिता कार्कीको ‘सान्नानी’ युटुव ट्रेनिङ्गमा (भिडियोसहित)
करेन्ट लागेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारीको मृत्यू
स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप नचल्ने !
गोर्खा संसार २०७६, २७ मंसिर शुक्रबार २२:१४
काठमाडौं । आगामी केही महिनाभित्रै विश्वका दशौं लाख मानिसले प्रयोग गरिरहेका स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप चल्ने छैन । पुरानो संस्करणका मोबाइल अपरेटिङ सिस्टममा ह्वाट्सएपको सपोर्ट बन्द भएसँगै निकट भविष्यमै पुरानो मोडलका लाखौँ मोबाइल फोनहरुमा ह्वाट्सएप नचल्ने भएको हो ।
सन् २०२० को फेब्रुअरी १ देखि आइओएस ८ र त्योभन्दा पुरानो अपरेटिङ सिस्टम भएका आइफोनमा ह्वाट्सएप चल्ने छैन । त्यस्तै एन्ड्रोइडको २।३।७ र त्यो भन्दा पुराना भर्सनको अपरेटिङ सिस्टम भएका डिभाइसमा पनि ह्वाट्सएपको सपोर्ट बन्द हुनेछ ।
स्मरण रहोस्, उल्लेखित अपरेटिङ सिस्टम भएका डिभाइसबाट नयाँ ह्वाट्सएप अकाउन्ट खोल्ने र विद्यमान अकाउन्ट रिभेरिफाइ गर्न सकिने सुविधा अहिलेदेखि नै बन्द भैसकेको छ ।
त्यस्तै ह्वाट्सएपले आगामी डिसेम्बर ३१ देखि नै सबै विन्डोज फोनहरुमा सपोर्ट बन्द गर्दैछ । डिसेम्बरको अन्त्यबाटै माइक्रोसफ्टले पनि विन्डोज १० मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमको सपोर्ट बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
ह्वाट्सएपका अनुसार पुराना अपरेटिङ सिस्टमका लागि अपडेट उपलब्ध गराउन बन्द भैसकेको हुँदा कतिपय फिचरहरुले अहिलेदेखि नै काम नगर्न सक्दछन् । एन्ड्रोइडको ४।०।३ तथा आइओएस ९ र त्यसभन्दा पछिल्ला अपरेटिङ सिस्टममा भने पूर्ववत् रुपमा ह्वाट्सएप चलाउन सकिनेछ । ब्लग पोष्टमा ह्वाट्सएपले भनेको छ, ‘तपाईंको आइओएस ८ डिभाइसमा रहेको ह्वाट्सएप अकाउन्ट आगामी फेब्रुअरी १ सम्म चलाउन सक्नुहुनेछ ।’
– एजेन्सीको सहयोगमा
कति दान गर्नेलाइ कस्ताे सम्मान ः च्याङलीकाे मंगलेश्वर महादेव मन्दिरमा लगाइएकाे महायज्ञमा दवाडीद्वारा ५० हजारकाे चेक हस्तान्तरण
२०७८, १६ फाल्गुन सोमबार ०९:०५
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफूहरुको विजयको सुरुवात – प्रचण्ड
२०७७, १३ पुष सोमबार २१:३८
राष्टपतिद्धारा बामदेव लाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन
२०७७, १ आश्विन बिहीबार १७:१८
२०७५, २ असार शनिबार १४:१०
गणतन्त्रको पहिलो चुलबुल
२०७५, ९ बैशाख आईतवार १५:१८
पुरुषले लिङ्ग परिवर्तन गरि आमा बनेर बच्चालाई स्तनपान गर्दै
२०७६, २९ मंसिर आईतवार १४:०९
१६ बर्षिय केटी पर्सन अफ् द इयर २०१९’ घोषित